ကယ်ဆယ်ပေးသူကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံ ဓာတ်ပုံ ပရိသတ်အကြိုက် ဆုရရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ကယ်ဆယ်ပေးသူကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံ ဓာတ်ပုံ ပရိသတ်အကြိုက် ဆုရရှိ
***MIDNIGHT EMBARGO*** Wildlife Photographer of the Year People’s Choice winner WINNER -Æ Jo-Anne-McArthur - Wildlife Photographer of the Year Pikin and AppolinaireJo-Anne McArthur,CanadaPikin,alowland gorilla, had been captured and was going to be sold for bushmeat but was rescued by Ape Action Africa. Jo-Anne took this photograph as the gorilla was being moved from her former enclosure withinasafe forest sanctuary in Cameroon toanew andlarger one, along withagroup of gorilla companions. She was first sedated, but during the transfer to the new enclosure she awoke. Luckily, she was not only very drowsy, but she was also in the arms of her caretaker,Appolinaire Ndohoudou, and so she remained calm for the duration of the bumpy drive.
ကယ်ဆယ်ပေးသူကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံ ဓာတ်ပုံ ပရိသတ်အကြိုက် ဆုရရှိ
ကယ်ဆယ်ပေးတဲ့သူကို ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံက ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ပရိသတ်က ရွေးချယ်တဲ့ အကောင်းဆုံး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဓာတ်ပုံဆရာဆုကို ရရှိသွားပါတယ်။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံမှာ ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံတွေကို ကယ်ဆယ်ပြီး ဘေးမဲ့တောကို ပို့ဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အဲဒီ ဓာတ်ပုံကို ဓာတ်ပုံဆရာ ဂျို အန်နီ မက်ခ်အာသာက ရိုက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဂေါ်ရီလာမျောက်ဝံကို ‘ပီကင်’ လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
ပီကင်ကို ဖမ်းဆီးပြီး သတ်ဖြတ်ရောင်းချဖို့ လုပ်နေစဉ် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အလှူရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ မျောက်ဝံများအရေး လှုပ်ရှားမှု အာဖရိက အဖွဲ့က ကယ်ဆယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျောက်ဝံတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး အသားကိုရောင်းချဖို့ ကင်မရွန်းမှာ တရားမဝင် ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကယျဆယျပေးသူကို ပှဖေ့ကျထားတဲ့ ဂျေါရီလာမြောကျဝံ ဓာတျပုံ ပရိသတျအကွိုကျ ဆုရရှိ
ကယျဆယျပေးတဲ့သူကို ဂျေါရီလာမြောကျဝံက ပှဖေ့ကျထားတဲ့ ဓာတျပုံဟာ ပရိသတျက ရှေးခယျြတဲ့ အကောငျးဆုံး တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျ ဓာတျပုံဆရာဆုကို ရရှိသှားပါတယျ။
ကငျမရှနျးနိုငျငံမှာ ဂျေါရီလာမြောကျဝံတှကေို ကယျဆယျပွီး ဘေးမဲ့တောကို ပို့ဆောငျတဲ့ လုပျငနျးစဉျအတှငျး အဲဒီ ဓာတျပုံကို ဓာတျပုံဆရာ ဂြို အနျနီ မကျချအာသာက ရိုကျယူခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ ဂျေါရီလာမြောကျဝံကို ‘ပီကငျ’ လို့ အမညျပေးထားပါတယျ။
ပီကငျကို ဖမျးဆီးပွီး သတျဖွတျရောငျးခဖြို့ လုပျနစေဉျ ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ အလှူရှငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ မြောကျဝံမြားအရေး လှုပျရှားမှု အာဖရိက အဖှဲ့က ကယျဆယျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မြောကျဝံတှကေို သတျဖွတျပွီး အသားကိုရောငျးခဖြို့ ကငျမရှနျးမှာ တရားမဝငျ ဖမျးဆီးမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။
Previous articleတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ ၁၈ လအတွင်း ၁၈ ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ရ
Next articleမောင်တောမြို့နယ်မှာ ကျပ် သိန်း ၂ ထောင် နီးပါး မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဖမ်းမိ